♣♣♣အိမ်မက်ချိူချို....အတွေးပိုပို♣♣♣: Gtalk အကြောင်း တစေ့တစောင်း
Gtalk အကြောင်း တစေ့တစောင်း
Gtalk ဆိုတာ Google က အလကားပေးတဲ့မေးလ်ပါ။ တခြားမေးလ်တွေထက် ပိုမိုလွယ်ကူ အဆင်ပြေချောမွေ့လို့ လူတော်တော် များများအသုံးပြုနေဆဲ...ဒါကြောင့် Gtalk နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေကို kozaw357 မှ စုစည်းပြီး ကူးယူဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။
(၁). မိမိ gtalk ကို ဘယ်လို ကာကွယ်ကြမလဲ....
(၂). Gtalk ကနေ လူတွေ အများကြီးနဲ့ Conference ပြောကြရအောင် ……
(၃). Gmail မဟုတ်ပဲ Invisible လုပ်ကြရအောင်....
(၄). Gtalk chat window ထဲမှာပဲ Youtube Video ကြည့်မယ်....
(၅). gtalk ကို skin လှလှလေးနဲ့သုံးရအောင်....
(၆). G-Talk ကနေ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာသီချင်းတောင်းဆို နားဆင်နိုင်သော အွန်လိုင်း ရေဒီယိုအစီအစဉ်...
(ရ). ကိုယ့် Gmail ကို သူများဝင်သုံးနေလားဆိုပြီး စစ်ရန်....
(၈). Gtalk မှာ ဝင်ဝင်လာတတ်သော Private Cam Virus ကိုရှင်းတဲ့ ဆော့ဝဲလ်..
(၉). gtalk မှာ မိမိနာမည်မကျန်ခဲ့စေချင်ရင်.........
(၁၀). Gtalk နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကို ဖုန်း Message ပို့ဖို့.......
(၁၁). G-talk ကရုပ်ပြောင်လေးတွေ (My Theme) ၊ နောက်ခံလေးတွေ...
(၁၂). Gtalk ကဲ့သို့အသုံးပြုနိုင်မည့် M-talk တဲ့....
(၁၃).Gmail တွင် ပို့ပြီးသား Mail ပြန်ဖျက်ချင်ရင်....
(၁၄). (Gtalk Shell) Gtalk မှာ ပုံလေးတွေကို Slideshow နဲ့ ပေါ်အောင်လုပ်နည်း...
(၁၅). GTalk တွင် လိမ်လည်နေသောသူများကိုရှာဖွေရန်....(update လုပ်ထားပါတယ်...)
(၁၆) .Gtalk Shortcut များ...
(၁ရ). Gtalk က offline chat (သူခိုးချက်)တွေကို ဖမ်းပုံဖမ်းနည်း...
(၁၈). Galk မှာ ကိုယ့်ကို ဘယ်သူတွေ block လုပ်ထားသလဲ... စမ်းသပ်နည်း....
(၁၉). GTalk တွင် လိမ်လည်နေသောသူများကိုရှာဖွေရန်....(update လုပ်ထားပါတယ်...)
Posted by ♣♣♣အိမ်မက်ချိူ♣♣♣ at 11:43 AM
Labels: techinical, ထွေရာလေးပါး
နေ့ခံညစံ (သို့မဟုတ်) နတ်ပြည်ပေါ်မှဒုက္ခများ